musha» Products » Healthcare Equipment
Munwe Pulse Oximeter Prince-100B3
Prince-100B Series anoshandisa OLED / STN chidzitiro, SpO2 uye kupomba mwero inogona kuverenga kubva hombe imwe pakona kusvika 170 dhigirii, uye kunze, chidzitiro inogona zvayaitenderera paguyo muna 2 kana 4 mirayiridzo. Zvimwe Anti-inofamba zvemichina anoita Prince-100B Series chezvipfuwo ezvinhu vari kudenha dzakadai varwere vane Parkinson chirwere.
Munwe Pulse Oximeter Prince-100B5
Munwe Pulse Oximeter - Prince-100B
Womuenzaniso itsva iyi ndiyo kumusoro kwokuwirirana shanduro Prince-100B series.And nayo anoudzawo akawanda anokosha ari 100B akatevedzana. Asi chete
womuenzaniso ichi anokwanisa kuva mvura-uchapupu, pokuputsa-uchapupu uye vakakatyamadzwa uchapupu. Kunyange kana iwe netsaona inodonha nayo, kana iwe teura mvura pamusoro payo kana kana iwe Ndaikudzungudzirai chigunwe chako apo ndichipfeka vaedzwa, kuchiri unogona kumhanya zvakanaka.
Zvechokwadi yakanakisisa munwe oximeter saka kure.
Oxisensor munhu mukuru-zvakarurama SpO2 vachiongorora pamwe Integrated okisijeni chipimo redunhu.
Easy ECG Monitor - PC-80A (Makaralı 4.0)
This Easy ECG Monitor inhoroondo ya kuyera uye achinyora ECG waveform uye paavhareji mwoyo yevanhu murwere vakura. Hazvina
kushanda kushandiswa mune makiriniki uye mumisha, uye zvakakunakira kushanda pedyo varwere pachavo.
inogona vakapakata yezvisikwa sensors kusanganisira vakasiyana
adapters kuti siyana tambo site, akadai munwe, gumbo, rutsoka
The Wrist Oximeter zvichiitirwa kushandisa kuchipatara, dzimwe
nharaunda zvokurapa uye kumba. Inowanika uye
zvakakunakira kuti akuteerere SpO2 mu-refu apo
kurara kana pane dzimwe basa daily panguva imwe chete
chigadzirwa ichi rinoshanda kuti montioring SpO2 uye PR.